ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် မဘသ တောင်းဆိုချက် ဖြေရှင်းဖို့ မလိုကြောင်း ဝန်ကြီးသူရ ဦးအောင်ကို ပြောကြား
အကြံပြုရရင် ယခုလို ရှောင်လွဲပီးသွား
ဘာသာရေးဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်
စေ ဖြစ်နိုင်သည့်အပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အနှစ် သာရများကောင်းမွန်သည့်ပုံရိပ်များကိုပြည်တွင်းပြည်ပတွင်အကျည်းတန်ရုပ်ဆိုးစေပါ
သည်။ ဗုဒ္ဓကဟောကြားသည့်လောဘဒေါသ မောဟမာန်မာနတွေ ငါစွဲတွေလျော့ချ ပျောက်ပြယ်အောင်လုပ်ရမည့်အစား
Jul 11, 2016 01:55 AM
မြန်မာတွေစကားပြောတတ်ပါစေ နေရပ်- အမုန်းတရားများအထင်မြင်လွဲမူများကင်းရှင်းကြပါစေ :
အမြင်ကိုပြောရရင် တာဝန်ရှိတဲ့သူ ရာထူးကြီး တဲ့သူတဦးဖြစ်လာရင် စကားတခုကို လက်လွတ်စပယ် တာဝန်မဲ့ပြောလို့ မရသလို. တာဝန်ရှိလို့ ပြောလိုက်ပီ ဆိုရင်လည်း ယင်းပြောကြားချက်အတွက်မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ တာဝန်အပြည့်ယူရပါမည်။
Democracy ဆိုသည်မှာ တာဝန်ယူမူ တာဝန်ခံမူပါ။ဒီနေရာမှာ အတိတ်သမိုင်း ကြောင်းတွေ ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက် တွေရှိနေရင်တောင်ယင်းခံစားမူကိုဘေး
လျှင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။အမုန်းတရားများအထင်မြင် လွဲမူများကင်းရှင်းကြပါစေ။
Jul 10, 2016 06:20 AM
ငါ့စကား နွား ရ :
(၉၆၉)လို့ အော်ပြီး ဘာသာရေးဆူပူမှုဖြစ်အောင်
လုပ်ခဲ့တဲ့ သူက ကျောထောက်နောက်ခံကောင်းကောင်း
ရှိနေလို့ (မဘသ)ဆိုပြီး ထလုပ် ။ အရိုးခံဆရာတော်
တွေကို စည်းရုံးပြီး ရှေ့တန်းတင်။ နိုင်ငံတကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အိုးမည်းသုတ်။ ဆဲချင်ရင် ထဆဲ ။ (မဟန)ရှိပြီးသားမို့ ဘာသာရေး အရ စင်ပြိုင်အဖြစ် (မဘသ) မရှိသင့်ဘူးပြောတော့ (ဘာသာရေး NGO)တဲ့။ NGO ဆိုတာ လူစုပြီး ဆဲဖို့ ၊ ရိုက်ဖို့ ၊ ဆူပူဖို့မှမဟုတ်တာ။ အများအကျိုးဆောင်တဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့။
Jul 10, 2016 12:46 AM
All of the above ??? :
အသားကင်ကို လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းမထားလို့ ကျီးထိုးတာကို ကျီးတွေကို လိုက်သတ်နေတော့ ၊ အသားကင်ကို ခွေးဝင်
ဆွဲရော ၊ တခါ ခွေးကို လိုက်ရိုက်နေပြန်တော့ ခွေးမရှိ
တော့လို့ ကြောင်မြီးတိုက ...
ကဲ ..ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ ။ ဘယ်သူ့အပြစ်ပါလဲ။ ကျီး ?
Jul 11, 2016 12:23 AM